Sidee lagu gaaraa guur farxad leh? | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Sidee lagu gaaraa guur farxad leh?
Sunday, August 13, 2017 Bulshada Edit
Bulsha:- Rag iyo dumar badan oo iska qaba ayaa iskula dhaqma in ay yihiin cadow, halkii ay ka ahaan lahaayeen asxaab. Ninku waxa uu isleeyay adiga ayaa qeef ah waxkasta oo aad dhahdo waa in la qaataa halka xaasku ay is leedahay ninkaaga la tartan oo xitaa waxyaabaha wanaaga ah ee uu sameeya maku mahadceliso. Dumar badan ayaan la qancin karin oo baahidooda shaqsiyeed iyo mida qaraabadeeda aysan dhamaad lahayn. Raga qaar xaasaskooda si xun ayay ula hadlaan oo xitaa qaar ayaa gacan u qaada. Hadaba maxaa talo ah?